Ungasiphucula njani isantya se-Intanethi- iGeofumadas
Ngo-Okthobha, 2009 Internet kunye neBlogs
Esi sihloko singamanga, ngokwenene indlela yokuphucula isantya kukuhlawula umgca wendlela ebhetele, uthenge ikhomputha engcono, utshintshe kwisiphequluli okanye uhambe ngendlela efundisiweyo.
Kodwa kunokwenzeka ukuba ngeqela elilungileyo, unxibelelwano olulungileyo kunye nesikhangeli esikhawulezayo, kubonakala ngathi kukho into engalunganga, unxibelelwano luyacotha kwaye kuthatha umhlaba ukubonisa iphepha. Nazi ezinye iingcebiso:
Ukuba ungaphezulu kweGeek, eli nqaku lingaphezulu kwexabiso, ngokuqinisekileyo usebenzisa i-Opera kwaye ukuba uyiMac ukhetha i-Safari. Zombini zomelele kakhulu.
Lo mfanekiso ungezantsi kukulula kwe-Chrome, iithebhu, ibha kunye nezinto ozithandayo, amaqhosha asisiseko wokubuyela umva, phambili, ukuvuselela, injini yokukhangela kwindawo enye yedilesi kunye namaqhosha amabini wento onokuhlala kuyo ngolunye usuku. Intombazana… ilivo le-AutoDesk kumboniso we-CAD Geek. com, ibhlog enkulu!
2. Ukucoca rhoqo
Sula imbali, amaphepha alondoloziweyo kunye nekiki inempilo ubuncinane kanye ngeveki.
I-Chrome inalo iqhosha lesibini, nangona kungalunganga ukufunda i-shortcut:
ctrl + shift + ye
okanye njengoko kuya kuba ngeSpanish
ctrl + imayus + supr
3. Ukucoca i-DNS cache
Oku kunokwenziwa ngokukrofa ngakwesokudla kwi-icon yoxhumo kunye nokukhetha ukulungiswa, kodwa ngezinye iimeko kuthatha ixesha elide, ubeka umngcipheko wokungafumaneki IP okanye ukuba unayo IP eneenkcukacha ngokuqinisekileyo awukwazi ukwenza nantoni na.
Ngoko, kungcono ukwenza okokudala:
Qala> sebenzisa> cmd> ngenisa
Sibona isikrini esimnyama esimnyama kwaye sasibhalela khona:
kwaye senza ukungena
Yimangalisa!, sebenzisa i-purgative ngaphantsi kwemizuzwana engama-5, ukuba loo nto ikhupha ihlazo lokuba unxibelelwano lwakho, kufuneka usebenzise iindlela ezintle zokuphepha ukufaka khuphela ii-accelerators, iinkqubo ezikhoyo ukwabelana kwamanzi, abangenayo ababa i-wireless okanye ukuhlaziywa kwe-antivirus enhle kuba kukho iiTrojans ezininzi ezibulalayo kule nto.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Jonga i-AutoCAD 2010 njenge-AutoCAD 2007
Post Next U-Obelix no-Asterix bafika kwi-50 iminyakaOkulandelayo »
4 Ukuphendula "Ungasiphucula njani isantya se-Intanethi"
Ayikho imbono ngejeneretha.
Ubunzima bee-imeyile beyifutshane kwaye andizange ndiyiqonde, sele isisombululo.
Yintoni ephakanyisiweyo nomhleli @ geofumadas, com hayi kuhamba
Ndifuna ukulingisa iNdebe yeHlabathi okanye ubuncinane amaqela aseHonduras. Ndifumana phi i generator number random?